Indlu encinci enepaki enkulu yokulibala malunga nayo yonke into - I-Airbnb
Indlu encinci enepaki enkulu yokulibala malunga nayo yonke into
UMartin ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Funda kwindawo ezolileyo eGarita 16 de Funes. Indlu inama-40 square metres kwindawo enye. Inegalari emile okwe-L enendawo egqunyiweyo engaphezulu kwe-50 m2 kwibala eli-1200 m2 elinedama lokuqubha. Ilungele izibini, iindibano zosapho zasemini. Izilwanyana zasekhaya zivumelekile.
Indlu yelizwe ebekwe kwindawo ezolileyo yeFunes, ilungele ukuphumla, ukuba nebarbecue, ukungena echibini kwaye ukonwabele ukuzola kunye nendalo. Ukongeza, isidlo sakusasa esomileyo, isonka se-toast, ikofu, iti kunye nobisi zibonelelwa.
Le ndawo ithule kakhulu, inemithi emihle kwaye phambi kwendlu kukho indawo entsha apho unokuhamba nge-rollerblading okanye ukukhwela ibhayisekile kunye nayo yonke inzolo emhlabeni. Ukutshona kwelanga kujongeka kukuhle kakhulu entshona.
Intombi yam kunye nam sihlala sifumaneka xa kukho imibuzo okanye iinkxalabo. Sihlala kwiibhloko ezili-10 kude.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Funes